ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးနှံပေး - Xinhua News Agency
ဒါကာ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ မြို့တော် ဒါကာရှိ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်၌ နေထိုင်သူများအား ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ကာကွယ်ဆေးများ စတင်ထိုးနှံပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဆင်းရဲသား ထောင်ပေါင်းများစွာသည် ဒါကာမြို့ရှိ Korail ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပထမဆုံးအကြိမ် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးများ ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ရှိ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသော အမျိုးသားတစ်ဦးအား နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပထမဆုံးနေ့တွင် လူပေါင်း ၁၅,၀၀၀ အား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးရန် ရည်ရွယ်လျက် ယာယီနေရာ ၂၅ ခုတွင် ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်၌ နေထိုင်သူများအား ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးကမ်ပိန်းကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Dhaka North City ကော်ပိုရေးရှင်း အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Md Selim Reza က သတင်းထောက်များကို ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ရှိ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တစ်ခုတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လူပေါင်း ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်နေထိုင်သော Korail ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်တွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနောက် အဆိုပါ ကမ်ပိန်းအား ယင်းမြို့ရှိ အခြားဆင်းရဲသားများအား ကာကွယ်ဆေး တိုးချဲ့ထိုးနှံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည် ဇန်နဝါရီလတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံက ကာကွယ်ဆေးတင်ပို့မှု အခက်အခဲဖြစ်ပြီးနောက် ဧပြီလ၌ လုပ်ငန်းများ ရပ်နားခဲ့ရသည်။ Sinopharm ကာကွယ်ဆေးများအား အရေးပေါ်အသုံးပြုရန် ဆေးဝါးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့က ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လတွင်မူ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းအား တရုတ်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းသော Sinopharm ကာကွယ်ဆေးများဖြင့် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Bangladesh begins administering COVID-19 vaccines to slum dwellers
DHAKA, Nov. 17 (Xinhua) — Bangladesh has begun administering COVID-19 vaccines to slum dwellers in capital Dhaka.
Thousands of dwellers took their first shots of the COVID-19 vaccine at Dhaka’s mega Korail slum on Tuesday morning.
Md Selim Reza, chief executive officer of Dhaka North City Corporation, told journalists that the campaign to vaccinate slum residents began at 25 booths, with the aim of inoculating 15,000 people on the first day.
After the vaccination at Korail slum, which houses around 300,000 people, he said the campaign will be expanded to inoculate other slum dwellers in the city.
Bangladesh launched the vaccine rollout in January. However, it had to suspend the operation in April after India halted export due toasupply crunch. The vaccination drive resumed in June with China-donated Sinopharm vaccines, after the drug regulator authorized emergency use of the Sinopharm vaccines. Enditem
Photo : (211116) — DHAKA, Nov. 16, 2021 (Xinhua) — A woman receivesadose of COVID-19 vaccine ataslum in Dhaka, Bangladesh, Nov. 16, 2021. (Xinhua)
2- (211116) — DHAKA, Nov. 16, 2021 (Xinhua) — A man receivesadose of COVID-19 vaccine ataslum in Dhaka, Bangladesh, Nov. 16, 2021. (Xinhua)
3- (211116) — DHAKA, Nov. 16, 2021 (Xinhua) — A woman receivesadose of COVID-19 vaccine ataslum in Dhaka, Bangladesh, Nov. 16, 2021. (Xinhua)